Orinasa mpanamboatra palitao China Down | Eigday
1. Ny lamba 100% nylon misy ny mylar thermal Lining
2. hazavana sy hazavana miaina FABRIC-Breathable ultra light material, coating tsy mahazaka rano, lamba nilona ahazoana aina ary tombo-kase amin'ny hafanana. Izy io dia manana kalitao mitazona rivotra mafana sy mitazona hafanana tsara, manome antoka fa afaka mankafy hafanana miavaka ianao ary mbola mitazona ny tampon'ny fahombiazanao amin'ny fomba maro miaraka amin'ny hetsika tsy voafetra!
3. TENA MAINTY ATAON'NY TAFANA- Afanaina vetivety ao anatin'ny segondra, singa miisa hafanana miisa 3 miteraka hafanana manerana ny faritra misy ny vatana (kibo havia sy havanana, afovoany averina); Amboary ny fanamafisana ny hafanana (Avo, antonony, ambany) amin'ny tsindry bokotra tsotra fotsiny.
4. 2021 DESIGN Nohavaozina: New mylar thermal Lining dia milamina amin'ny hoditra, rafitra fantsona fibre karbaona tsara indrindra, miantoka anao tsy hahavery hafanana be loatra ary hankafy hafanana bebe kokoa noho ireo firakotra mafana eny an-tsena.
5. PREMIUM QUALITY- Fitaovana avo lenta sy paosin-drivotra tsy tantera-drano, paosy mora idirana miampy satroka azo esorina dia natokana manokana ho an'ny maraina mangatsiaka ary fiarovana fanampiny amin'ny andro be rivotra. Fanomezana Krismasy tsara ho an'ny mpianakavy, namana, mpiasa.
6. SASIN'NY MASINA - Fonosana misy akanjo mafana 1 * unisex, fonosana bateria 1 *, boaty fanomezana 1 *, kitapo fanasan-damba 1, kitapo 1 ary kitapo tsy misy rano 1 *.
Hazavana sy hazavana miaina FABRIC-Breathable ultra light material, coating tsy mahazaka rano, lamba nilona ahazoana aina ary tombo-kase amin'ny hafanana. Izy io dia manana kalitao mitazona rivotra mafana sy mitazona hafanana tsara, manome antoka fa afaka mankafy hafanana miavaka ianao ary mbola mitazona ny tampon'ny fahombiazanao amin'ny fomba maro miaraka amin'ny hetsika tsy voafetra!
FANASITRAN'NY HEATRA MAINTY- Afanaina vetivety ao anatin'ny segondra, singa 4 fanafanana fibre karbaona miteraka hafanana manerana ny faritra misy ny vatana (kibo havia sy havanana, vozon'akanjo sy afovoan-damosina); Amboary ny fanafana fanafanana 3 (Avo, salasalany, ambany) amin'ny tsindry bokotra tsotra fotsiny.
Drafitra nohavaozina - New SILVER mylar thermal Lining dia milamina amin'ny hoditra, système POLY HEAT tsara indrindra, miantoka anao tsy hahavery hafanana be loatra ary hankafy hafanana bebe kokoa noho ireo firakotra mafana eny an-tsena. HEAT HERIN'NY 12 ora miasa miaraka amin'ny bateria 5200mAh voamarina.
PREMIUM QUALITY- Fitaovana avo lenta sy paingotra YKK tsy misy rano, paosy mora idirana miampy saron-tenda azo esorina dia natao manokana ho an'ny maraina mangatsiaka ary fiarovana fanampiny amin'ny andro be rivotra.
Safidy mety sy mafana ho anao, ny fianakavianao, ny namanao ary ny mpiasa hankafizanao hetsika ivelany toy ny moto, ny môtô, ny fiakarana tendrombohitra, ny lasy, ny fitsangatsanganana an-tongotra, ny ski, ny fanjonoana, ny fihazana na ny birao ary ny asa ataonao mandritra ny volana fararano sy ririnina manohitra ny hatsiaka sy mangatsiaka. toetrandro.
Dual Battery Charger miaraka amina US, EU, UK&AU dia tafiditra ao anaty safidy.
MESINY VOAASA - Fonosana ahitana akanjo miisa 1 * unisex, kitapo 1was * Kitapo fanasan-damba, kitapo 1 pcs * kitapo, charger 1pcs *, boky 1 * * *, «desiccant» 1 bateria.
Raha misy antony, tsy faly amin'ny fitafiana nohafanainay ianao, azafady mifandraisa anay ary hiatrika izany haingana araka izay tratra izahay.
Teo aloha: Akanjo mafana
Manaraka: SAVIOR fonon-tànana voaaro amin'ny rivotra tsy misy rivo-doza ho an'ny ski, Snowboarding
Manga fotsy 5V
Palitao midina Wt003
Akanjo palitao WT001
Tsy miandany i Vest